Home Wararka Ciidanka AMISOM oo Qarax Lala Eegtay.
Ciidanka AMISOM oo Qarax Lala Eegtay.
Qaraxyo nooca miinada dhulka lagu aaso lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee qaybta ka ah howl-galka AMISOM ee Somalia.
Qaraxyada oo is xig-xigay, isla-markaana ahaa labo ayaa waxaa ciidamada Kenya iyo kolonyo ay wateen lagula beegsaday deegaanka Kambooni.
Ilo deegaanka ah ayaa inoo sheegay in qaraxyada, kadib ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Kenya ay fureen rasaas, taas oo la sheegay in aysan geysan wax khasaare ah.
Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in qaraxyadan ay ku dhaawacmeen illaa 5 askari, sidoo kale uu burbur soo gaaray gaadiid ka mid ah kolonyada ciidanka Kenya.
Sidoo kale ciidamada la qarxiyey oo u socday biyo dhaamin ayaa lagu soo warramayaa in weerarka qaraxyada ah, kadib ay sii wateen socdaalkooda, xaalada ayaa haatan deggan.
Ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada Kenya iyo Jubbaland oo ku aadan qaraxyadaas oo ay mas’uuliyadooda sheegteen xoogaga Al-Shabaab.
Previous articleAl Shabaab oo sheegtay dil ka dhacay Muqdisho
Next articleRW Rooble oo Qaylodhaan ka Muujiyey Abaaraha Dalka ka jira.
Cumar Al Bashiir oo xaalad deg deg ah kusoo rogay ...
Rabshado ka dhacay Buula-burde iyo Xaalada oo kacsan !